Fivoriana sy famakafakana ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos | Fitaovana maimaim-poana
Fivoriambe sy fanadihadiana ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
Tony of Fruits | | Fanontana 3D
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity izay efa nisy ny zavatra niainantsika nametraka ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ HEPHESTOS. Ity mpanonta ity natolotry ny mpanamboatra amin'ny faran'ny 2016 dia fanovana ny maodely navoakany tamin'ny taona 2014. Na dia mbola mitohy manome aingam-panahy avy maodely iray avy amin'ny fiarahamonina RepRap misy ny fitaovana elektronika novokarin'i BQ ary ny famolavolana ny ampahany tafiditra rehetra dia nohavaozina mba hanatsarana ny fitoniana sy ny marim-pototra amin'ny fanontana.
Rehefa avy nijery fizaran-taona maromaro an'i McGyver handrisika ny tenanay izahay, dia sahy nanangona mpanonta pirinty iray tao amin'ny KIT izahay ary hanazava amin'ny volo, famantarana ary famintinana horonantsary an'ny fiangonana hoe ahoana ny traikefa
1 Fampitahana ireo vokatra mitovy amin'izany
2 Unboxing sy fivoriambe an'ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
2.1 Ny BQ dia te-hanavao ireo mpanonta printy KIT toa ny fanaka nohavaozina Ikea
2.2 Fotoana lany hanaovana fivoriambe
2.3 Amboary ny sehatra fananganana
3 Lafiny ara-teknika sy manokana ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
4 Lafiny teknika hafa
5 Isan'andro amin'ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
6 Ekipa tiana miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Maker
7.1 Vidiny sy fizarana
8 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Fampitahana ireo vokatra mitovy amin'izany
Na eo aza ny zava-misy fa hatramin'ny fiandohan'ny fivarotana azy, fanatsarana maro no niseho teo amin'ny tsena izay tsy ampidirin'ny maodely BQ, ny fihenan'ny RRP farany teo dia mametraka an-tsaina an'ity ekipa ity. Raha mampiakatra ny teti-bolantsika isika dia afaka mahazo maodely izay misy fandriana mafana ary manana koa isika nohadihadiana ato amin'ity bilaogy ity na afaka mividy ilay "fandriana mafana" fanavaozana izay BQ izahay tsena ao amin'ny tranonkalany.
Unboxing sy fivoriambe an'ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
Tsy toy ny lahatsoratra hafa izay nandinihinay ireo mpanonta. Alohan'ny hanombohantsika handinika ireo toetra ara-teknikan'ny fitaovana dia hifantoka amin'ny fanazavana ny zava-niainana tamin'ny fanangonana ny mpanonta izahay.
Ny BQ dia te-hanavao ireo mpanonta printy KIT toa ny fanaka nohavaozina Ikea
Tonga ny mpanonta fonosina ao anaty fonosana kely sy mora entina avy amin'ny orinasa rehetra. Ekipa afaka hitantsika mora foana izy io any amin'ny toeram-pivarotana sy fivarotana elektronika, ho azontsika atao ny mahazo azy io saika na aiza na aiza eto amin'ny firenentsika nefa tsy mila mankany amin'ny magazay manokana izay mety ho sarotra kokoa ny mitady azy. Izy io koa dia maodely amidy an-tserasera avy amin'ny tranonkala malaza sy malaza.
Rehefa manokatra ny boaty isika dia mahita a Sombin-jatony voalamina amin'ny rihana 2. Somary nampatahotra ny fahitana ilay sombin-javatra voadidy tonga lafatra, saingy hitanay haingana ilay boky fampianarana ary hitantsika fa isaky ny dingana dia feno antsipiriany amin'ny antsipiriany ireo sombin-javatra hampiasaina ary isaina tsara ireo mba tsy hisy korontana. Mampahatsiahy antsika izany (mitahiry ny halavirana) amin'ireo boky torolàlana amin'ny fanangonana fanaka ao Ikea.
Ny fampitahorana faharoa dia rehefa manokatra ny boaty misy ny fitaovana rehetra isika, ny habetsaky ny voanjo sy ny baomba izay hiafarantsika hampiasaina dia goavana. Miaraka amin'ny boky torolàlana ny maodely dia ampidirina miaraka amin'ny voanjo sy baody habe amin'ny fiainana mba hahafantarana azy haingana. Amin'io lafiny io dia tena ilaina tokoa raha toa ka nasiana marika ireo kitapo misy ny karazany roa.
Andao isika hiasa, ity ny rohy mankany amin'ilay horonan-tsary hahafahanao mahazo hevitra ho anao momba ny vidin'ny tsy fahampiana toa ahy manangona kitapo toy izao:
Tao amin'ny fivoriambe dia nahita olana madinidinika izay azonay vahana teny an-dalambe. Hotsipihinay eto ambany ireto:
Ny sasany amin'ireo faritra vita pirinty dia tsy mifanaraka amin'ny milimetatra amin'ny tsorakazo sy ny sisa ary mila manao hery isika. Izany dia miteraka risika amin'ireo vakim-pirinty ireo.
Sombim-panombohana maro no manana lavaka tsy maintsy mifanaraka voanjo mampiasa vy soldering. Amin'ity antsipiriany ity dia tsy nahita boky momba ny bokin'ny mpanamboatra. Fa raha hitantsika ny anarany amin'ny horonantsary ananan'ny mpanamboatra eo amin'ny vavahady DIWO
Ny kit dia ahitana ny lakile Allen rehetra ilaina amin'ny fivoriambe sy ny zoro. Rehefa esorina mafy izy ireo dia mila wrenches 2 isika.
Ny voanjo mampifandray ny fametahana marindrano sy mitsangana dia tsy azo henjanina miaraka amin'ny makarakara tafiditra ao anaty boaty. Mila iray lehibe kokoa isika.
El fampisehoana tariby mankany amin'ny tabilao elektronika dia nanazava tamin'ny fomba tsy mahaliana ao amin'ny boky fampianarana. Tsy maintsy nampifandraisinay tamin'ny fomba mifanohitra tanteraka amin'ny fomba fahitanay azy ao amin'ny boky. Fahendrena ny mampiasa mpampitohy izay mamela azy io hampiasaina amin'ny lalana marina.
Tsy mahomby sy mahasosotra ilay mpiaro HotEnd rehefa mampiasa ny mpanonta, vita ny fanesorantsika azy.
El metaly nolokoina ny metaly mitsivalana amin'ny endrika volondavenona. Amin'ny zoro sasany dia azonao atao ny mametaka ny loko nefa tsy misy fiatraikany amin'ny pirinty amin'ny fomba rehetra.
Fotoana lany hanaovana fivoriambe
Nampiasainay Fotoam-pivoriana 3 adiny 2 sy sasany eo ho eo. Nandeha miadana izahay, nanamarina ny dingana tsirairay ary nanamarina fa tsy mijanona ny firaketana ny fizotrany. Amin'ny ankapobeny, ny fitomboan'ny toa anay izany tsotra nefa lava. Tena hazavaina tsara ilay boky torolàlana, ary ny mpanamboatra koa dia manana fanangonana horonan-tsary amin'ny antsipiriany momba ny fizotrany manontolo.
Amin'ny ambaratonga famolavolana, ny seta dia toa ekipa tsara, afa-tsy ny faran'ny hazakazaka.. Raha vantany vao tafangona tanteraka ny fitaovana dia tsy mihetsika ireo ary tsy maintsy fantatsika fa rehefa mikarakara ireo fitaovana izy ireo dia tsy mampihetsika antsika.
Amboary ny sehatra fananganana
Ny fototra fanontana dia apetaka amin'ny teboka efatra amin'ny visy efatra, nanolorana azy ho avo roa heny misesy izy alohan'ny hanontana.
El Ny BQ dia tsy mivarotra kit fanavaozana ny mampitony tenaNa izany aza, tao amin'ny forum dia nanampy mpampiasa maro izy ireo hanova ny firmware mba hampiasa ireo singa ilaina hampiharana an'io asa io.
Lafiny ara-teknika sy manokana ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
Ny mpanonta dia maodely iray misy fahombiazana tsara ary efa fantatra ny fomba fahanterana tsara. Manana vahaolana amin'ny 60 micron Z sosona mitovy amin'ny maro amin'ireo mpanonta ankehitriny ary ampy ho an'ny ankamaroan'ny asa fanontana azontsika atao. Amin'ny fampidirana a rafitra vy somary avo kokoa noho ny mpanonta pirinty mitovy amin'izany ny lanjany 13 Kg Tsy lanja mavesatra loatra izany ary hamela antsika hamindra azy tsara raha mila izany isika.
El Faritra fanontana 215x200x180 Izy io dia mety amin'ny ankamaroan'ny pirinty, na dia mila izany aza isika dia afaka mahazo fototra lehibe kokoa.
La haingam-pirinty dia 100mm / s somary miadana raha oharina amin'ny hafainganam-pandehan'ny mpanonta maoderina.
Ny extruder ampiasaina amin'ity mpanonta ity dia hahafahantsika mampiasa filament PLA sy ny toy izany toy ny filamente vita amin'ny hazo na metaly. Izy io koa dia mamaly tsara miaraka filament malefaka fa tsy afaka mampiasa filament misy mari-pana mampihetsi-po be na tsy mety miraikitra isika, satria ny mpanonta tsy misy fandriana mafana. Na ny fandriana mafana na ny extruder an'ny mpanonta BQ Hephestos 2 vaovao dia kojakoja azontsika vidiana misaraka.
Lafiny teknika hafa
El sariitatra extrusion dia manana endrika bika na dia lehibe sy miorina amin'ny toerana iray ihany aza ireo mpampifandray tariby. ny Fehin-kibo X miraikitra mafy ary tsy namaha fotoana na oviana na oviana.
Toy ny amin'ny mpanonta hafa izay efa nodinihintsika teo aloha malahelo ny switch ON / OFF. Amin'ny maha vahaolana vetivety antsika dia azontsika atao foana ny mampifandray ny tariby avy amin'ny famatsiana herinaratra ivelany satria manana fananganana tena matanjaka izy io.
Ity dia mpanonta izay afaka miasa irery amin'ny fanontana avy amin'ny SD na mifandray amin'ny PC amin'ny alàlan'ny tariby USB. Amin'ireo tranga roa ireo dia tanterahiny tsara ny asany. Raha mila ekipa miaraka amin'i fifandraisana Wi-Fi afaka manao fampanjariam-bola fanampiny kely foana izahay ary mametraka mpizara Octoprint amin'ny Raspberry Pi 3 (modely misy wifi ho fenitra). Notsapainay izany ary mandeha tsara izy io.
Laminy ireo zavatra nampiasa CURA izahay, programa iray izay tena ankafizinay ary mifanaraka tanteraka amin'ity mpanonta ity. Avy eo dia mila mitahiry ireo rakitra GCODE miaraka amin'ny volontsika amin'ny karatra SD ampidirintsika ao anaty mpanonta fotsiny izy. Ny Kit dia tsy misy karatra SD
Ny mpamaky karatra SD dia ampifandraisina amin'ny fampirantiana ary miorina eo an-tampon'ny mpanonta printy izay manamora ny fampifandraisana sy ny fanapahana karatra. ny fampisehoana manana famirapiratana tena tsara saingy gaga izahay fa ny kodiarana fanaraha-maso dia tsy nitondra lasitra plastika.
Isan'andro amin'ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
Ny fampisehoana mpanonta dia mampiseho fampahalalana momba ny satan'ireo fanontana, toy ny tamin'ny tranga teo aloha malahelo izahay mahita ny fotoana sisa tavela hamita ny asa efa mandeha. Tsy mpanonta printy mitabataba indrindra izy io, noho izany dia afaka miasa ao amin'ny efi-trano misy ny fitaovana ihany isika, nefa tsy tandindomin-doza ny fahasalamantsika ara-tsaina.
Ireo pirinty dia misy a tsara famaranana ary ny fahamendrehana tsara dia voatazona ary ambany ny tahan'ny hadisoana isaky ny tapany.
Taorian'ny fanontana pirinty mihoatra ny telopolo dia nandinika ny voanjo sy ny sendika rehetra izahay nefa tsy nahita tsy misy na inona na inona lasa malalaka na niharatsy tamin'ny fampiasana mafy ny fitaovana.
Ekipa tiana miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Maker
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo lafiny nanaitra anay indrindra tamin'ity ekipa ity dia ny fampahalalana, fanovana ary fanampiana be dia be izay mety ho hitantsika -tserasera amin'ny fikasana hanatsara ity mpanonta ity.
Ity dia lafiny iray tena lehibe raha tiantsika hivoatra ny mpanonta printy hanatsara ny asany. Manomboka amin'ny sensor-n'ny self-leveling ka hatrany amin'ny fanatsarana ireo faritra mihombo hanomezana fitoniana bebe kokoa ny fiangonana. Na aiza na aiza no itodihantsika mijery dia hahita fampahalalana momba ny mpanonta izahay; thingiverse , ao amin'ny forum ofisialy , in Youtube …. Na aiza na aiza no itodianay dia hahita mpampiasa marobe hatrany miaraka amin'ity fitaovana ity izahay. Noho ny lazan'ity mpanonta ity dia tena f izahaymora ny mahita fanovana isan-karazany notsapaina tamin'ny mpanao maro be.
Nanonta sy nanangona fanovana maromaro tao amin'ny PLA izahay izay namela anay hanatsara tsara ny fisehon'ireo fitaovana. Nanakalo ny sarin'ny birao tamin'ny sasany izahay faritra natao manokana hihazonana ny vera izay anaovanay pirinty dia nanampy a torolàlana ho an'ny filamenta, natambatra a bokotra amin'ny baikon'ny fampiratiana ary nihatsara izahay ny tohanan'ny tsorakazo miadidy ny hetsika manaraka ny axis Z.
Mikasa ny hanao pirinty boaty iray hanatsarana ny fampisehoana koa izahay ary hanampy fanohanana amin'ny webcam. Ao amin'ny Octoprint dia afaka manampy renirano misy maodely webcam manokana izahay ary manara-maso ny fiheveranay na eo akaikin'ny mpanonta na kilometatra maro izahay.
Na dia marina aza fa ny fahatsoran'ilay modely dia naseho rehefa nandinika ny sasany amin'ireo toetra ara-teknika izy ireo, ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos dia safidy tena tsara hampahafantatra ny tenantsika amin'ny tontolon'ny fanontana 3D. Amin'ny lafiny iray dia manana ekipa miaraka a vidiny tena afa-po hahafahantsika manomboka manonta tsy misy fampiasam-bola lehibe loatra. Etsy ankilany, efa a 3D mpanonta toy izany malaza Ny olana rehetra anananay amin'ny mpanonta dia azo vahana amin'ny forum iray na hafa. Ankoatr'izay, ny ekipa dia manana safidy fanitarana roa izay ahafahantsika mivoatra sy mivoatra amin'ny fe-potoana antonony. Tianay ny hampivelatra ny BQ KIT ampisamparana vaovao izay misy ny mety ny mampitony tena. Ity dia fomba mora hanatsarana sy hampanan-karena ny traikefan'ny mpampiasa
Vidiny sy fizarana
Izy io dia fitaovana malaza be izay azontsika atao amin'ny lafiny rehetra amin'ny foibe fiantsenana. Taorian'ny famerenana vao haingana momba ny RRP dia afaka mahazo ity mpanonta ity a habetsahan'ny € 499
Famerenana ny: Tony of Fruits
Ekipa miaraka amin'ny fanohanana lehibe avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpanao
Mora ny mahita fitaovana ao amin'ny magazay
Mifanaraka amin'ny Octoprint
Ny voanjo dia tsy maintsy ampidirina amin'ny vy amin'ny vy
Tsy misy fandriana mafana
Tsy tafiditra ao ny fitokisan-tena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Fivoriambe sy fanadihadiana ny mpanonta 3D ao amin'ny KIT BQ Hephestos
Toy izao ny fiarakodia 3D vita pirinty noforonin'i KLIO Design
Ny PC Challenge, fanamby vaovao Raspberry Pi